Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Njem Nleta Anabataghị Ike Ya
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • investments • Akụkọ gbasara Jamaica • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ọbụlagodi na nnukwu ọganiihu nke njem nlegharị anya Jamaica na-enwe tupu oria ojoo COVID-19, Minista njem nlegharị anya Jamaica Hon. Edmund Bartlett kwenyere na ọ bụ naanị na ha kpụchapụrụ nnukwu ikike ụlọ ọrụ a nwere.
Enwere ohere na nsogbu COVID-19 coronavirus a.
N'agbanyeghị mmetụta ọjọọ nke ọrịa na-efe efe na akụnụba njem nlegharị anya nke ụwa, ka a na-etinye atụmatụ ma dobe ya iji wughachi ya, ugbu a bụ oge zuru oke ịtụgharị uche na ụlọ ọrụ ahụ.
Nke a bụ ohere imepụta ngwaahịa njem nlegharị anya na -adịghị ize ndụ, yana mkpokọta, na -eguzogide ma na -adigide.
Minista Bartlett kwuru okwu na nzukọ ọgbakọ ndị ọzọ na -ahụ maka itinye ego na Caribbean (CARAIA) nke emere na Hotel AC nke Marriott dị na New Kingston, Jamaica, taa, Julaị 29, 2021. Gụọ - ma ọ bụ gee ntị - ihe ọ ga -ekwu.
Njem nleta bụ otu n'ime ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa ma na-eto ngwa ngwa, na-ebute mmepe mmekọrịta akụ na ụba na akụ na ụba, mmụba na itinye ego, imepụta ọrụ, na mmepe ihe owuwu.
Nọmba tupu ọrịa ọjọọ na-akọ akụkọ. N’afọ 2019, njem njem na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ ruru 10.4% nke GDP zuru ụwa ọnụ ma kwado ibi ndụ nde mmadụ 334 (10.6% nke ọrụ niile). Ka ọ dị ugbu a, mmefu ndị ọbịa mba ofesi ruru ijeri US $ 1.7.
Na mpaghara, ebe ndị Caribbean nwetara ihe ruru nde 32.0 ndị mbata njem nleta mba ofesi, nke nyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri US $ 59 na GDP mba dị iche iche, ijeri US $ 35.7 na mmefu ndị ọbịa, ma kwado ọrụ nde 2.8 (15.2% nke ọrụ niile).
Mgbe ọ nọ na mpaghara, 2019 bụ afọ na-emebi akụkọ maka ndị bịara njem nleta na ego ha nwetara. Anyị nabatara ndị ọbịa nde 4.2, ngalaba ahụ nwetara ijeri US $ 3.7, nyere 9.8% na GDP nke mba ahụ, gụrụ 17.0% nke itinye ego itinye ego na mba ofesi (FDI) wee mepụta ụfọdụ ọrụ 170,000 ozugbo na -emetụta 100,000 ọzọ.
Tupu nsogbu, njem nlegharị anya chụpụrụ 15% nke owuwu, 10% nke ụlọ akụ na ego, 20% nke nrụpụta yana 21% nke akụrụngwa yana ọrụ ugbo na ịkụ azụ. N'ozuzu, ngalaba njem na -eto site na 36% n'ime afọ iri atọ gara aga megide ngụkọta akụ na ụba nke 30%.
Mgbe ị gbakwụnyere na Jamaica dị na Caribbean, mpaghara na-adabere na njem nlegharị anya n'ụwa, mgbe ahụ ị nwere ike ịghọta mkpa njem na JamaicaMgbasawanye akụ na ụba mgbe ọrịa na-efe efe gasịrị.
Itinye ego na njem nlegharị anya na -enye Jamaica ohere kacha mma iji nwetaghachi ma wusie akụ na ụba ya ike. Ya mere, enwere m obi ụtọ na a kpọrọ m ka m gwa ndị nnọchi anya ndị otu nzụkọ Caribbean Alternative Investment Association (CARAIA) taa ka anyị nwee ike inyocha ohere itinye ego maka njem nlegharị anya nke ga -akwalite uto nke ụlọ ọrụ na -enye aka nke ukwuu na ọdịmma ọha na akụ na ụba nke ndị anyị. .